ईश्वर पोखरेलको प्रस्तावले ओलीलाई झट्का, के छ प्रस्तावमा त्यस्तो ? — Imandarmedia.com
ईश्वर पोखरेलको प्रस्तावले ओलीलाई झट्का, के छ प्रस्तावमा त्यस्तो ?
काठमाडौ। नेकपा एमालेको जारी विधान महाधिवेशनमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले ५२ पृष्ठ लामो संगठनात्मक प्रस्ताव पेस गरेका छन्।ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको महाधिवेशनमा महासचिव पोखरेलले छलफलका लागि पेस गरेको प्रस्तावमा मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकासका क्रममा जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा प्रतिपादन गरिएको जनताको बहुदलीय जनवाद नै यतिबेलाको सबैभन्दा क्रान्तिकारी विचार भएको बताएका छन्।
जनताको बहुदलीय जनवादका आधारमा विकास गरिएका कार्यक्रम, कार्यदिशा, नीतिहरू नै एमाले निर्माणका आधार भएको उल्लेख गरेका छन्। साथै उनले एमाले कार्यकर्ताहरूमा पछिल्लो समय समयमा कुनै मापदण्डविनै सदस्यता प्रदान गर्ने, पार्टी सदस्यता बापतको शुल्क, लेबी अरू कसैले तिरिदिनुपर्ने घटनाहरू देखिन थालेको तथा प्रत्येक वर्ष नवीकरण हुनुपर्ने सदस्यता नै नवीकरण नभएको पाइएको उल्लेख गरेका छन्।
​त्यस्तै पोखरेलले संगठनात्मक अराजकता र गुटबन्दीको समस्या रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।पार्टीले योजनाबद्ध रूपमा वैचारिक कामलाई अघि बढाउन नसक्ने हो भने संगठनात्मक अराजकताको समस्या समाधान हुनेछैन। तसर्थ पार्टीले आगामी दिनमा योजनाबद्ध रूपमा संगठनात्मक अराजकता र गुटबन्दीको विरुद्धमा वैचारिक राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ।
महासचिव पोखरेलको प्रस्तावमा भनिएको छ । यो प्रस्तावले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तनाव भएको छ। प्रस्तावले ओलीलाई गुटबन्दी गरेको आरोप लागेको छ। उनले घुमाउरो पारामा अध्यक्ष ओलीले गुटबन्दी गरेको र यसको अन्त्य हुनपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल निर्माणको अभिभारा एमालेको काँधमा रहेकाले आफ्नो पार्टीले फेरि पनि विजय हासिल गर्ने बताएका छन्। पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशनको समापन सत्रमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमा उठेका विषयबारे स्पष्ट पार्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले देश बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो भएकाले देश बिग्रिएमा एमालेले अरुलाई दोष दिएर उम्कन नपाउने जनाए।
उहाँले भ्रममा परेर पार्टीबाट बाहिर गएकाहरूलाई फर्काउन पहल गर्न निर्देशन दिए। उहाँले जनताको बहुदलीय जनवादको जगमा यसलाई परिष्कृत तथा राष्ट्यि पुँजीको विकास गर्दै गर्दै समाजवादोन्मुख राज्य निमार्णका लागि एमाले सदैव प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए। उहाँले आम कार्यकर्ता र जनताले दिएको आफू प्रतिको विश्वासलाई कत्ति पनि कुठराघात गर्न नदिने सङ्कल्प गरे। अध्यक्ष ओलीले अबको निर्वाचनमा पार्टीलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने गरी बहुमत ल्याउने दाबी गरे।
केपी शर्मा ओलीले आफू बाँचिरहेकाले विरोधीहरूलाई चिन्तित बनाएको टिप्पणी गरेका छन्। एमाले विधान महाधिवेशनको समापन सम्बोधन गर्दै ओलीले आलोचकहरु आफू बाँचेकैले चिन्तित भएको बताएका हुन्। मान्छेहरू अहिले २ कुराले चिन्तित छन्। एउटा म बाँचिरहेकाले चिन्तित छन्। यो बिरामी हुन्छ। अप्रेसन गर्छ। किड्नी फेर्छ। बिरामी भयो अब त मर्छ कि भन्यो, फेरी बाँच्छ, ओलीले भने, अर्को कार्यकर्ता र जनताले मलाई असाध्यै माया गर्छन्।
त्यसले एमालेलाई फाइदा पुग्छ। अब बाँचेकामै चिन्तित छन् त म के गरुँ ? तपाईहरूको मायालाई एक इन्च तलामाथि हुन दिनेछैन। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। म बहुमत ल्याएर देखाउनेछु। उनले कार्यकर्ताले आफूलाई माया गर्ने विषय र एमालेलाई फाइदा पनि हुने विषयले पनि विरोधीहरु चिन्तित भएको पनि बताएका छन्। एमालेमा बोल्न पाइँदैन भनेर समेत हल्ला फिँजाएका छन्।
उनले भने, ‘उनीहरुले देवत्त्वकरणका कुरा पनि उठाएका छन् । तर, हामी लिडरसिपमा विश्वास गछौँ। हामी देवत्वकरणका पक्षमा छैनौं। हामी देवता मान्दैनौं। तर नेतृत्व भने चाहिन्छ। हामी सबै नेता हो। त्यो बीचमा पनि नेतृत्व गर्ने लिडरसिप चाहिन्छ। नेतृत्वको वरपर गोलबन्द हुने हो। ओलीले जबजलाई समयअनुसार संशोधन गर्दै लैजान सकिने पनि उल्लेख गरेका थिए।
ओलीले आफूमाथि नेता तथा कार्यकर्ताहरुले देखाएको विश्वासलाई एक थोप्लोपनि तलमाथि हुन नदिने र एमालेलाई फेरि एकल बहुमत दिलाएमात्रै नेतृत्व छाड्ने बताएका छन् । पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशनको समापन समारोहमा उठेका विषयको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘बहुमतमा पुर्‍याएर यस्तो उस्तो कुनै मधुकैटवले हल्लाउन नसक्ने सुदृढ स्थितिमा पुर्‍याएर छोड्ने हो।
उनले जनताको बहुदलीय जनवादको दुरबिनले आफूहरुले टाढाको भविष्य सजिलै हेर्न सक्ने पनि बताए। उनले भने,‘मलाई तपाईँहरुले गरेको विश्वासमा एक थोप्लोपनि तलमाथि पर्नेछैन्। देशको हितको विरुद्ध, जनताको हितको विरुद्ध, प्रगतिको विरुद्ध, पार्टीको हितको विरुद्ध एउटा पनि कदम म बाट चालिनेछैन्। म व्यक्तिको रुपमा होईन, अहिले नेकपा एमालेको अध्यक्षको रुपमा भन्दैछु । नेकपा एमालेलाई मलाई लाग्छ, बहुमतमा पुर्याएर हल्लाउन नसक्ने सुदृढ स्थितिमा पुर्याएर छोड्छु।
त्यस्तै, उनले एमाले जनताको लागि काम गर्ने पार्टी भएको बताएका छन्। उनले भने,‘एमाले परिवर्तनको लागि हो। यो कामकाजी पार्टी हो। देश र जनताको सेवक पार्टी हो। सेवककै हिसाबले जनताको सेवा गर्छौं। मैले सरकार गठन भएको एक महिना हुँदानै सम्बोधन गरेर यी यी काम गरें भनेर देखाएका थिएँ। तर, अहिलेको सरकारले केही काम गरेको छैन्। अढाई महिनामा सरकार पनि पूर्णता भएको छैन्। हामी सरकारबाट बाहिरियौं, भूमिहीनका सपना बाहिरिए । बैशाखसम्म मेलम्ची ल्याउँछौं भनेर अहिलेको सरकारले भनेको छ, तर पन्ध्र महिनापछि एमालेको सरकार आउँछ अनि यो बन्छ।
ठीक छ, यो सरकारले बैशाखभित्र आँफैले भनेको कुरा गरेर देखाओस। उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले दिएका सुझाव मनन गरिने विश्वास दिलाए। उनले मंसिरमा तय गरिएको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिने पनि बताए। उनले जिल्ला अधिवेशन पनि अब विलम्ब नगरी सबै अधिवेशन गरेर संगठनात्मक रुपमा चुस्त दुरुस्त भएर अघि बढ्ने बताए।